विज्ञान जिज्ञासा Archives - मूल्याङ्कन अनलाइन
आकाश महर्जन ‘एउटा बूढो मान्छे बच्चैमा मरेछ ।’ यो एउटा सरल वाक्य हो तर यो वाक्य पहिलोचोटि सुन्ने प्रायः सबैलाई हाँसो लाग्छ । हाँसो कुनै मानिसको दैनिक जीवनको एक अभिन्न पाटो हो । हाँसो एक प्रकारको औषधि हो भन्ने कुरा त हामी सबैले सुन्दै आइरहेकै हौँ । तर चुट्किला सुन्दा वा कुनै अनौठो कुरा देख्दा वा आफैंले भोग्दा हाँसो किन लाग्छ ? हाँसो लाग्नुको वैज्ञानिक कारण, अझ भनौँ मनोवैज्ञानिक कारण के हो त ? हाँसो किन लाग्छ भन्ने विषयमा थुप्रै अनुसन्धानहरू भएका छन् र ती अनुसन्धानहरूले थुप्रै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन् । तीमध्ये तीनवटा सिद्धान्तहरू वैज्ञानिक जगतमा सर्वमान्य छन् ।पूरा पढ्नुहोस्
तुल्सीदास महर्जन अचम्म लाग्छ वैज्ञानिकहरुको कल्पना ! गजब छ उनीहरुको तर्क र खोज ! उनीहरु प्रत्यक्ष रुपमा देख्दै नदेखिने र उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणले पक्रनै नसकिने भएपनि अनपेक्षित परिणामहरुको विश्लेषण रपूरा पढ्नुहोस्
आकाश महर्जन काउकुतीको कार्यविधि वैज्ञानिकहरुको लागि धेरै पहिलेदेखि नै रहस्यमयी रहँदै आएको छ । काउकुती लाग्दा किन हाँस्छौँ भन्ने कुराको मूर्त जवाफ अहिले पनि वैज्ञानिकहरुले दिन सकेका छैन । तरपूरा पढ्नुहोस्
सूर्यबाट पाँचौँ ग्रह बृहस्पति ग्रह निकै विशाल छ । यसको पिण्ड सौर्य मण्डलका अरु सबै ग्रहहरुको संयुक्त पिण्डभन्दा पनि २.५ गुना ठूलो छ । आकारकै कुरा गर्ने हो भने पनिपूरा पढ्नुहोस्
सार्वजनिक ठाउँमा पाद आउँदा सबैलाई औधि अप्ठेरो हुन्छ । हामी सबैले स्विकार्नैपर्छ, हामी सबैले कम्तीमा एकचोटि अरुलाई गन्हाउने गरी सार्वजनिक ठाउँमा पादेका छौँ । कहिले आवाज आउँछ, कहिले फुस्स ।पूरा पढ्नुहोस्
कुखुरा पहिला आयो कि अण्डा ? यो प्रश्नले प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरु देखि आधुनिक संसारका हामी सबैलाई व्याकुल बनाउँदै आएको छ । अण्डा पार्नको लागि कुखुरा चाहिन्छ र कुखुरा बन्नको लागिपूरा पढ्नुहोस्
गत २०१६ को अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर तीन महिनाका पूर्णिमाहरुमा लगातार सुपरमुन भए । यो सन् १९४८ को जनवरी २६ को सुपरमुनपछि सबैभन्दा नजिकको सुपरमुन थियो । र, सन् २०३४पूरा पढ्नुहोस्